Ona kuti Apple Watch inodzinga sei mvura mukufamba zvishoma | Ndinobva mac
Ona maApple Watch anodzinga sei mvura mune inononoka kufamba
Vaviri vetubers vatenga imwe Super kamera kumhanya-mhanya uye vakazvipira kutamba nayo uye kurodha zvinyorwa zvavo kuYouTube. Ivo vanopenga zvishoma, uye ivo vanoisa chaiwo akasarudzika mavhidhiyo, kubva kusvetuka kwekati kusvika kubhora kumeso. Asi chokwadi ndechekuti zvinoda kuziva kwazvo kuti inononoka kufamba yakafotwa kumhanya kwazvo.
Asi vhidhiyo inotinakidza ndiyo yekupedzisira yakaiswa kuchiteshi chako. Mumwe wavo ane Apple Watch, uye hapana chimwe chinhu chakaitika kwaari kunze kwekutora firimu pairi kumhanya uchidzinga mvura mushure mekunyudzwa. Chokwadi ndechekuti inoshamisa.
Mavhidhiyo atinoona pa National GeographicSemuenzaniso, mune inononoka kufamba yakatorwa pahukuru hwepamusoro kumhanya ivo vanoyevedza. Isu tinowanzovaona vachiratidzira mavhidhiyo paterevhizheni anoratidzwa pazviratidziro zvekutengeserana uye munzvimbo dzekutengesa. Kungotarisa kuputsika kwegirazi kunogona kuve chiitiko chinotyisa.
ari Slow mo vakomana Idzo shamwari mbiri dzine chiteshi ichi paYouTube, uye vachingoburitsa vhidhiyo inoshamisa yeApple Watch vachishandisa ruzha kutora mvura kubva kumatauri ayo madiki mushure mekunyudza mudziva.
Kana Apple Watch yakanyudzwa pasi pemvura, shandisa iyo submersible maitiro. Izvi zvinoremadza yekubata skrini kuti usazovhiringidzwa nemvura. Mushure meizvozvo, zvinodikanwa kuti ubvise mvura kubva mumatauri, kana zvikasadaro haizonzwikwe zvakanaka painoburitsa ruzha. Aya ndiwo maitiro akajairwa mushure mekugeza neako Apple Watch.
Paunopedza kugeza kana yekushambira uye kubuda mumvura, iwe unofanirwa kutendeuka dijiti korona kudzima iyo isina mvura modhi. Izvi zvakare zvinoita kuti chishandiso chiridze ruzha rukuru kumanikidza mvura kubuda mumatauri. "Wachi yako inonzwika uye ungangonzwa kunwa mvura pachiuno chako," anodaro Apple.
Chokwadi ndechekuti chinoonekwa mukufamba zvishoma, zvinokatyamadza kuti sei zvine simba chete nekuzunguzika kwema membrane emutauri ivo vanobuda Kudzingwa madonhwe madiki emvura aive aunganidza mukati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ona maApple Watch anodzinga sei mvura mune inononoka kufamba
Ndeapi maMac anozosara kunze kweshanduro nyowani ye macOS?
Apple Zviitiko zveTVOS zvinofamba kuenda kuTV app